On May 17, 2021 15
“Oduu ilmaan Aadam lamaan haqaan isaan irratti dubbisi, yommuu isaan lamaanuu qurbaana dhiyeessanii isaan keessa tokko irraa ni qeebalame, kan lammataa irraa immoo hin qeebalamne. Kan lammata kan jalqabaatin ni jedhe: ‘Dhugumatti ani si ajjeesa.’ Inni jalqabaas ni jedhe: ‘Rabbiin warra isa sodaatan qofarraa qeebala.'” [Surat Al-Ma’idah 27]
Qurbaana jechuun wanta gara Rabbii ittiin dhiyaataniidha. Fkn kan akka wareegaa (qalmaa). Ilmaan Aadam lamaan kunniin wantuma wal fakkaatu haa hojjataniyyuu malee Rabbiin tokko irraa qeebale, kan lammata irraa immoo hin qeeballe. Sababni isaas, niyyaan isaanii garagara. Kan jalqabaa niyyaa toltuu qaba, kan lammataa immoo niyyaa badduu qaba. Kanaafi, dhumarratti, “Rabbiin warra isa sodaatan qofarraa qeebala” jechuun cufe. Rabbiin sodaachun niyyaa tolchuu ykn bareechisu irraa jalqaba.
July 6, 2022 sa;aa 6:24 am Update tahe